မော်ဒယ် PR9721200 အရွယ်အစားကက်ဘိနက်:1200*520*890မီလီမီတာ、ကြည့်မှန်:700*30*950မီလီမီတာပစ္စည်းများထိုင်းသပိတ်ပင်သစ်သား Countertop Quartz ဝှမ်း 1280 ℃တစ်ချိန်ကကြွေထည်ကိုပုံသွင်းသည်. Glaze အထူ>1.1mm Mirror 5mm ကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်အရောင် C110 အနက်ရောင် walnut + C25 အဝါရောင်အဖြူရောင် Hardware DTC ပျော့ပျောင်းသောပတ္တာ & အနိမ့်ဆုံးအံဆွဲဆလိုက် 1. VALSPAR ဆေးသုတ်ခြင်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး. အကွိမျမြားစှာ ...
လူကြိုက်အများဆုံးခေတ်သစ်ရေချိုးခန်း Vanity ပေးသွင်း
မော်ဒယ် PR9791000 အရွယ်အစားကက်ဘိနက်:1000*600*860မီလီမီတာ、ကြည့်မှန်:1000*30*780မီလီမီတာကုန်ကြမ်းထိုင်းသပိတ်ပင်သစ်သား Countertop ကျောက်ဝိုင်း 1280 ℃တစ်ချိန်ကကြွေထည်ကိုပုံသွင်းသည်. Glaze အထူ>1.1mm Mirror 5mm ကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်အရောင် C222 မူရင်းသစ်သား + C260 မီးခိုးရောင် Hardware DTC ပျော့ပျောင်းသောပတ္တာ & အနိမ့်ဆုံးအံဆွဲဆလိုက် 1. VALSPAR ဆေးသုတ်ခြင်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး. ရေစိုခံအကွိမျမြားစှာ…
Oak ခေတ်သစ်စတိုင်ရေချိုးခန်း Vanity
မော်ဒယ်က F-77501000 အရွယ်အစားကက်ဘိနက်:1000*580*850မီလီမီတာ、ကြည့်မှန်:1000*30*750မီလီမီတာကုန်ကြမ်းထိုင်းသပိတ်ပင် + Ash Ash Countertop Quartz ဝှမ်း 1280 cer တစ်ချိန်ကကြွေထည်ကိုပုံသွင်း. Glaze အထူ>1.1mm Mirror 5mm ကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်အရောင် C252 orange + C215 မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် Hardware DTC ပျော့ပျောင်းသောပတ္တာ & အနိမ့်ဆုံးအံဆွဲဆလိုက် 1. VALSPAR ဆေးသုတ်ခြင်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး. အကွိမျမြားစှာ ...
မော်ဒယ် PR990800 အရွယ်အစားကက်ဘိနက်:800*580*860မီလီမီတာ、ကြည့်မှန်:800*30မီလီမီတာပစ္စည်းများထိုင်းသပိတ်ပင်သစ်သား Countertop Quartz ဝှမ်း 1280 ℃တစ်ချိန်ကကြွေထည်ကိုပုံသွင်းသည်. Glaze အထူ>1.1မီလီမီတာကြေးမုံ 5mm copper free silver mirror Color C256 အစိမ်းရောင် Hardware DTC ပျော့ပျောင်းသောပတ္တာ & အနိမ့်ဆုံးအံဆွဲဆလိုက် 1. VALSPAR ဆေးသုတ်ခြင်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး. အကွိမျမြားစှာရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့,…
မော်ဒယ်နံပါတ်. PR-7641200 ပစ္စည်းပင်မကက်ဘိနက်: အစိုင်အခဲသစ်သား; စကျင်ကျောက်ထိပ် & ကြွေထုပ်အရွယ်အစား Vanity size: 1200*540*890မီလီမီတာ、ကြေးမုံအရွယ်: 00700 * 40 mm ပန်းချီ America Valspar Huarun ပန်းချီကား.7ပန်းချီလွှာ. ထုပ်ပိုးကြေးမုံ, သီးခြားစီကက်ဘိနက်နှင့်စကျင်ကျောက်ထုပ်. 1. ကြည့်မှန်: ပထမ ဦး ဆုံးအတွင်းပိုင်း EPE, နှင့်အတူ6ဘေးထွက် 2cm အထူမြှုပ်စံ5အတွင်းပိုင်း ...
မော်ဒယ် F-7466 အရွယ်အစားကက်ဘိနက်:1600*650*880မီလီမီတာ、ကြည့်မှန်:800*50*1100မီလီမီတာပစ္စည်းပြာသစ်သားကောင်တာသဘာ ၀ စကျင်ကျောက်ဝှမ်း ၁၂၈၀ ℃တစ်ချိန်ကကြွေထည်ကိုပုံသွင်းသည်. Glaze အထူ>1.1မီလီမီတာကြေးမုံ 5mm copper free silver mirror Color C213 မီးခိုးရောင် Hardware DTC ပျော့ပျောင်းသောပတ္တာ & အနိမ့်ဆုံးအံဆွဲဆလိုက် 1. VALSPAR ဆေးသုတ်ခြင်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး. အကွိမျမြားစှာရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့, မဟုတ်ဘူး…
ကြွေထုပ်ထိပ် & အင်တုံနှင့်အတူခေတ်သစ်စတိုင်သပိတ် finish ကိုပရိဘောဂပရိဘောဂ
မော်ဒယ်နံပါတ်. PR9941600 ပစ္စည်းပင်မကက်ဘိနက်: အစိုင်အခဲသစ်သား;ကြွေတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါထိပ် & အင်တုံအရွယ်အစား Vanity အရွယ်အစား: 1600*550*860မီလီမီတာကြေးမုံအရွယ်အစား:1500*45*750mm ပန်းချီအမေရိက Valspar Huarun ပန်းချီကား.7ပန်းချီလွှာ။; အစွန်းအထင်း ; ထုပ်ပိုးကြေးမုံ, သီးခြားစီကက်ဘိနက်နှင့်စကျင်ကျောက်ထုပ်. 1)ကြည့်မှန်: ပထမ ဦး ဆုံးအတွင်းပိုင်း EPE, နှင့်အတူ6ဘေးထွက် 2cm အထူမြှုပ်စံအတွင်း၌ ...
မော်ဒယ်နံပါတ်. PR9941000 ပစ္စည်းပင်မကက်ဘိနက်: အစိုင်အခဲသစ်သား;ကြွေတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါထိပ် & အင်တုံအရွယ်အစား Vanity အရွယ်အစား: 1000*550*860မီလီမီတာကြေးမုံအရွယ်အစား:900*45*750mm ပန်းချီအမေရိက Valspar Huarun ပန်းချီကား.7ပန်းချီလွှာ။; အစွန်းအထင်း ; ထုပ်ပိုးကြေးမုံ, သီးခြားစီကက်ဘိနက်နှင့်စကျင်ကျောက်ထုပ်. 1)ကြည့်မှန်: ပထမ ဦး ဆုံးအတွင်းပိုင်း EPE, နှင့်အတူ6ဘေးထွက် 2cm အထူမြှုပ်စံအတွင်း၌ ...
123နောက်>...20 စာမျက်နှာ 1 ၏ 20